Fanambarana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manoloana ny zava-nitranga eto amin’ny firenena izay nandratrana sy namoizana ain’olona indray nandritra ny fotoana nanaovan’ireo solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo tatitra ho an’ny vahoaka ny sabotsy 21 aprily 2018,
Ny K3F dia manao izao fanambarana izao
1- Miondrika am-panajana manoloana ireo namoy ny ainy ary mivavaka sy mampahery ny fianakavian’izy ireo. Mirary fahasitranana haingana ihany koa ho an’ireo naratra ;
2- Manameloka amin’ny heriny rehetra ary manamafy ny fehinkevitra nivoaka tamin’ny atrikasa nataon’ny K3F tany Fianarantsoa fa ampy izay ny ra latsaka eto amin’ny firenena ;
3- Misintona ny sain’ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy mahafehy ny fitantanana ny firenena intsony izy ireo ka tsy tokony hiziriziry fa handray izay fanapahan-kevitra hampitony izao savorovoro izao ;
4- Mampahatsiahy, fa ny hanorenana firenena hanjakan’ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary ny fiadanana no tanjona ka aoka samy ho vonona hifampidinika ny ankolafin-kery rehetra mba hirosoana amin’izany ao anatin’ny fifanakalozan-kevitra sy ny fihavanana Malagasy ;
5- Miantso ny foloalindahy sy ny mpitandro ny filaminana mba hijoro ho tena tandroka aron’ny vozona eto amin’ny firenena ka hiantoka tokoa ny fiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany ary hiaro lalandava koa ny fahalalahana maneho hevitra izay zo fototra voarafitry ny Lalampanorenana ;
6- Miangavy ny raiamandreny ao amin’ny FFKM hanohy ny ezaka efa nataony hampihavana ny Malagasy ;
7- Miantso ny vahoaka sy ny mpanao politika mba ho tony manoloana ny zava-misy ary handinika tsara izay fomba hitantanana ny firenena amin’ny ho avy ;
Vonona hatrany ny K3F ny hijoro ho sehatra tsimialonjafy hifampidinihan’ny samy Malagasy mba hahazoana mampanjaka ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary ny fiadanana eto amin’ny Nosindrazantsika ity.
“Aza mety ho resin’ny ratsy, fa reseo amin’ny soa ny ratsy” Rom 12 :31
Natao teto Antananarivo androany fa 21 aprily 2018
Ny komity mpandrindra